Nasser Al-Khelaifi oo kiciyay xamaasadda taageerayaasha PSG sababa la xiriira Messi – Gool FM
(Paris) 23 Juun 2022. Madaxweynaha kooxda Paris Saint-Germain ee Nasser Al-Khelaifi ayaa aaminsan in xilli ciyaareedka soo socda uu markhaati ka noqon doono Lionel Messi oo soo bandhigi doono qaab ciyaareedkiisa ugu fiican.
Messi ayaa soo afjaray xiriirkii uu la lahaa kooxdiisii taariikhiga ahayd ee Barcelona bishii August ee la soo dhaafay, kahor inta uusan u dhaqaaqin Paris Saint-Germain, waxayna taageerayaasha PSG aaminsan yihiin inuu wax weyn ku soo kordhin doono xiddiga reer Argentina.
Xiddiga reer Argantina wuxuu la ciyaaray Paris Saint-Germain xilli ciyaareedkii 2021/22 tartamada oo dhan 34 kulan, isagoo dhaliyay 11 gool, wuxuuna caawiyay 15 gool kale.
Haddaba shabakada SportSkeeda ayaa shaacisay, wareysi uu bixiyay Nasser Al-Khelaifi, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Qaabka ugu fiican ee Messi waxaan arki doonaa xilli ciyaareedka cusub.”
“Shaki kuma jiro in Lionel Messi uu ku guuleystay Ballon d’Or 7 jeer, taas oo ah rikoor, kani ma ahayn xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa.”
“In ka badan 20 sano oo uu ku sugnaa Barcelona, Messi waxa uu helay wadan cusub, magaalo cusub, horyaal cusub, koox cusub, iyo dhaqan cusub, xitaa sidoo kale qoyskiisa, waxa uu sidoo kale ku dhacay caabuqa Korona Fayras.”
“Xaallada uma fududeen Messi xilli ciyaareedkii hore, laakiin xilli ciyaareedka soo socda waxa aan arki doonaa qaabkii ugu fiicnaa abid ee Messi.”
RASMI: Bayern Munich oo ku dhawaaqday saxiixa Mané